आफ्नै हातले stamped डिस्क चित्रकारी: को प्रक्रिया र सुविधाहरू विवरण
सरल उपस्थिति भए तापनि एक लामो समय को लागि जाली पाङ्ग्रा वोग मा हुन। यी डिस्क बाहेक हेर्न ठूलो क्लासिक कार (विशेष गरी एक शेल्फ संग, उबला)। यी पाङ्ग्रा धेरै व्यावहारिक छन् - दरार छैन, र क्षति को मामला मा सजिलै कुनै पनि वेल्डिंग बिना पङ्क्तिबद्ध गरिएको छ। तर यी ड्राइव एक ठूलो बेफाइदा छ - तिनीहरूले जंग। अधिक समय, पोर्ट को आफ्नो दृश्य। त्यसैले, प्रश्न आफ्नो पुन: प्राप्ति बारे उत्पन्न हुन्छ। आजको लेखमा हामी एक "पुन: डिजाइन" वा चित्रकला बनाउन कसरी हेर्न हुनेछ stamped डिस्क आफूलाई।
यी पाङ्ग्रा को उपस्थिति पुनर्स्थापना धेरै विधिहरू छन्:
रबर हटाउने संग।
पहिलो विधि, जो पछि रंग ड्राइव नंगे लागू छ टायर, एउटा यात्रा पनि समावेश छ। हो, धेरै सजिलो एक सतह मा तामचीनी लागू हुन्छ। तर केही समस्या छन्। तपाईं prematurely यस्तो pereobuvki र पाङ्ग्रा टायर लिन हतार भने, त्यहाँ टायर स्थापना गर्दा तामचीनी क्षतिग्रस्त गरिने एक जोखिम छ। यो सतह पूरा सुकाउने लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। साथै, हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति स्पेयर पाङ्ग्रा एक सेट छ। र साँच्चै लागत टायर अप एक हजार rubles हुन सक्छ। यसलाई आफ्नो हात संग क्यासेट देखि डिस्क stamped बजेट चित्रकला आउँदा, त्यसपछि यो विधि काम गर्ने छैन।
razbortirovki बिना विधि pluses
यो धेरै लाभ छ किनभने धेरै मोटर चालकहरुलाई यो विधि छनौट गर्नुहोस्:
समय बचत गर्नुहोस्। आधा दिन काम सामना गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो आफ्नै हात, वा 2-3 घण्टा संग डिस्क को स्प्रे पेंटिंग बाट उत्पादन गरिएको छ। आखिर, यस्तो तामचीनी 7-10 मिनेटमा dries। साथै, त्यहाँ टायर ड्राइभिङ समय खर्च र डिस्क को दोस्रो सेट खोज्न कुनै आवश्यकता छ।
पैसा बचत गर्दै। razbortirovkoy संग पाङ्ग्रा रंग गर्न, तपाईं दुई पटक टायर भ्रमण गर्न आवश्यक छ। यो थप खर्च। साथै, जब टायर जूता आवश्यक पाङ्ग्रा सन्तुलन गरे। यो सबै को लागि एक मूल्य मा आउँछ।
म कार देखि पाङ्ग्रा हटाउन बिना, स्पट मा रंग गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यो मुद्रांकन डिस्क रंग गर्न छिटो तरिका गर्छ। यो sloped तामचीनी तल रोल हुनेछ किनभने तर यो खतरनाक छ। फलस्वरूप, streaks गठन गरिनेछ। तिनीहरूलाई हटाउनुहोस् एकदम कठिन - यो पूर्ण सबै तामचीनी हटाउन आवश्यक छ। त्यसैले पाङ्ग्रा वोल्ट नट आदि खोल्नु र आफ्नो हात तेर्सो सतह मा डिस्क थिचिएको एउटा चित्रकला बनाउन अल्छी हुन छैन। सबै भन्दा राम्रो प्रभाव हासिल गर्न मात्र तरिका हो।
तपाईं के गर्नुपर्छ?
आफ्नै हातले चित्रकला stamped डिस्क गर्न, तयार गर्नुपर्छ:
स्प्रे। औसत मा, चार इन्च व्यास डिस्क 14 400 milliliters को क्षमता संग देखि 12डिब्बे जान्छ। यो तपाईं पसलमा चलाउन हतार छैन त, भण्डारमा किन्न राम्रो छ। एक अवशेषहरु रंग लागि थप उपयोगी छ। साँच्चै, समय कुनै पनि ड्राइभ चिप्स देखिन्छन्। तिनीहरूले स्टक देखि नै तामचीनी लुकाउन सक्छ। तसर्थ, 3-4 डिब्बे को एक न्यूनतम किन्न।
उपभोग्य। यो टेप masking, degreaser र कागज।
छैन इट्टामा कार अप prop गर्न, यो राम्रो एक पाङ्ग्रा आफ्नो हात संग चित्रकला stamped डिस्क बनाउन छ।
पहिलो डिस्क राम्ररी सफा गर्नुपर्छ। एक tableware वा कार शैम्पू लागि डिटर्जेंट एक समाधान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछि, भोकमरी र प्रक्रिया antisilikonom गर्न सतह। यो विलायक सतहमा रहन्छ सबै चिल्लो धुन टाढा हुनेछ।
खियाले विरुद्ध लडाई
हामी पहिले भने छ रूपमा, जाली पाङ्ग्रा खियाले सम्पत्ति हो। डाई सकेसम्म लामो समयसम्म चलेको गर्न, यो जंग हटाउन आवश्यक छ। यो अन्त गर्न, डिस्क सतह एक खियाले कनवर्टर लागू गरिएको छ। यो एक स्प्रे को रूप मा धन प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। संरचना समान डिस्क को सम्पूर्ण क्षेत्र कवर र जस्ता को एक सुरक्षा तह सिर्जना गर्नुहोस्। यो मुद्दा ध्यान। आखिर, तपाईंले तयार सतह मा रंग राख्नु (antisilikon र खियाले corrode गर्न सक्दैन) भने, जंग पहिले नै पहिलो धुने मा हुन्छ। जंग को ठूलो निशान को उपस्थिति मा, स्यान्डपेपर प्रयोग गर्नुहोस्। एक धातु ब्रश प्रयोग गर्न प्रयास - त्यो तामचीनी कारखाना सोचो हुनेछ। फलस्वरूप, जब चित्रकला को महत्वपूर्ण जोखिम र खरोंच देखेको गरिनेछ।
खैर, fillers बिना डिस्क मा गहिरो खरोंच पंक्तिबद्ध चाहनेहरूलाई लागि, हामी "विरोधी गुरुत्वाकर्षण।" प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौँ
यो काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो। उहाँबाट, र चित्रकला गुणस्तर निर्भर हुनेछ। जहाँ राय फरक र यो छ। को sidewall टायर Masking टेप - पुरानो जमानाको तरिका भन्दा टाँस्न केही सल्लाह। बस अन्य एक बाटो मा कार्डहरू एक डेक। तर अन्य विधिहरू छन्:
पुरानो पाङ्ग्रा sidewall स्थापना। यो नै व्यास को एक अनावश्यक टायर फेला पार्न मात्र आवश्यक छ (चौडाई महत्त्वपूर्ण छैन) र sidewall कटौती गर्न। यो पूर्वानिर्धारितएकाईहरू एक प्रकारको रूपमा सेवा गर्नेछन्। विधि एकदम छिटो छ र शुद्धता आवश्यकता छैन। रंग लागू पाङ्ग्रा को sidewall ठीक सेट र बस।
A3 ढाँचामा कागज को प्रयोग। यो एकदम कठिन छ र यो A4 रूपमा हावा बन्द झटका छैन। व्हील रिम र टायर तेर्सो बीच अंतर मा कागज सेट गर्नुहोस्। यसका अतिरिक्त, तपाईं यो सबै टेप masking कस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। यो पूर्वानिर्धारितएकाईहरू reusable। रंग लागू गर्दा यो भिजेको छैन।
रंग को आवेदन
निस्सन्देह, यो गर्न सक्छन् - छैन stamped डिस्क रंग उत्तम तरिका हो। को पानी छर्कने देखि तामचीनी राख्न आफ्नो हात राम्रो संग। तर हामी बजेट चित्रकला छ किनभने, बस एक यस्तो विधि प्रयोग गर्नुपर्छ। तसर्थ, sidewall अधिक पेस्ट, भनेर तामचीनी व्हील को भाग मा निर्देशित छैन। थप क्यासेट हल्लाइन्छ र तथाकथित विकास तह उत्पादन। यो Thinnest हुनुपर्छ। धातु सम्भव priming बिना कारखाना तामचीनी रंग रहन भने। दोस्रो तह मोटा हुनेछ। जल दाग जोगिन प्रयास - 30-40 सेन्टिमिटर को एक दूरी मा समान रूप मेकअप लागू गर्नुहोस्। तेस्रो तह संग नै तरिका। तपाईं एक शानदार प्रभाव हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने, स्पष्ट वार्निश प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई मा एक समान अल्गोरिदम धेरै पत्रहरु मा पनि लागू हुनुपर्छ। को वार्निश छैन केवल चमक दिन तर क्षति तामचीनी देखि आधार सुरक्षा हुनेछ।
त्यसैले हामी आफ्नै हातले stamped डिस्क को एक चित्रकला कसरी उत्पादन गर्न बाहिर समझ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्रक्रिया प्रत्येक पटक-पटक गर्न सकिन्छ। र यो (हुनत यो निकै काम सुविधा हुनेछ) को टायर डिस्क देखि हटाउन छैन आवश्यक छ।
आईप्याड 3: समीक्षा, विशेषताहरु, लाभ र बेफाइदा
टायर Kumho KW22: समीक्षा
Priora hatchback - नयाँ नजर प्रिय कार
को ऋषि मद्दत गर्छ गर्भावस्था योजना बनाउँदा
यस बालिका आवंटन जब आदर्श हो?
क्रसवभर - यो के छ: एक जीप वा एक भ्यान?
Radmila। नाम को अर्थ। प्रकृति र भाग्य
Snowboard हेलमेट: सिंहावलोकन, वर्णन, आकार
फर्नीचर श्रृंखला "HEMNES" को घर को भित्री मा
कति प्रत्यक्ष Husky: शिक्षा सामग्री र कुकुर आहार निर्भरता
शक्ति र कमजोरी महान् Russow (रौस्सौ, इतिहास, Hyperborea, Limuriya, एटलान्टिस, मानिस, सभ्यता)